Kuchinja Wiricheya Mufananidzo - Zvakajairika Manyepo
Pakutaurwa kweshoko "wiricheya" chii chinobva chapinda mupfungwa dzako? Vanhu vazhinji havadi iyo wiricheya nokuti kufamba, saka zvakajairika wiricheya yemawoko chingave chinhu chekutanga icho vanhu vazhinji vanofunga nezvacho. Zvipatara zvizhinji zvine bhuku rakajairika mavhiripu, ayo anoshandiswa kutakura varwere mukati nekukomberedza chipatara.
Vamwe vanhu vanogona kunge vane simba remufananidzo mavhiripu kana kunyange scooter sezvo paine zvakawanda kushambadza paTV nezve vakuru vanowana mawiricheya emagetsi kubva kukambani yavo yeinishuwarenzi.
Izvo vanhu vazhinji vasingafunge nezvazvo ndizvo mavhiripu izvo zvinoita kuti vashandisi vatambe mitambo, kukwira masitepisi uye kuvabvumidza ivo kuti vapinde munzvimbo yakamira. Kune akawanda matsva matsva mavhiripu pamusika nhasi uye isu zvino ticha tarisa uye mamwe emamwe akasarudzika anowanikwa nhasi.
Iyo Speedy Bikes kambani inopa bhasikoro basa ku mavhiripu. Chishongedzo chakanamatira kune wiricheya yemawoko uye inoita kuti mushandisi afambise iyo wiricheya by kushandisa tsoka kana maoko anofamba. Iyo kambani inopawo sarudzo yekushandura iyo wheelchair yakajairwa kune bhasikoro remagetsi.
Ikozvino kune magetsi ezuva anosungirirwa kumagetsi mavhiripu izvo zvinoita kuti zvionekwe kunge gorofu. Nesimba rezuva rinopa simba iyo wiricheya, Inotambanudza bhatiri remagetsi re wiricheya.
ichi wiricheya yakasikwa kuti ibatsire kuwedzera kuri kukura kwevanhu mu Japani. Nzvimbo yechigaro ndiyo yakasarudzika ficha yeiyi wiricheya. Ruzhinji rwe mavhiripu inoda kuti mushandisi apfugame mabvi kuti agare mu wiricheya. Chigaro cheRodem chakakwirira zvakakwana kuti mushandisi agare pasi kana kusimuka nyore, izvo zvakanaka kune vashandisi vane mabvi akashata.
Iko kune mota yemagetsi pasi pemberi hood iyo inopa masimba iyo wiricheya. Inogona kudzorwa ne joystick kana iwo anobata. Rodem mavhiripu akafanana zvakanyanya nema scooter pane simba mavhiripu.
Aya angori mashoma eiyo wiricheya sarudzo pamusika nhasi. Wiricheya dhizaini iri kuchinja nekukurumidza kuzadzisa zvido zvakasiyana siyana zvevashandisi vakasiyana siyana. Kana uri parizvino kushandisa a wiricheya, chengetedza ziso kugadziriso nyowani inogadzirisa chero nyaya dzauinadzo neyako yazvino wiricheya.